UGU DAMBAYN: Saxeexa Cusub Ee Chelsea Timo Werner Oo Ugu Dambayn Shaaca Ka Qaaday Shaqsiga Kaliya Ee Sababta U Ah Inuu Blues Yimaado - Gool24.Net
UGU DAMBAYN: Saxeexa Cusub Ee Chelsea Timo Werner Oo Ugu Dambayn Shaaca Ka Qaaday Shaqsiga Kaliya Ee Sababta U Ah Inuu Blues Yimaado
Weeraryahanka ah saxeexa cusub ee kooxda Chelsea ee Timo Werner ayaa shaaca ka qaaday shaqsiga kaliya ee sababta ugu weyn u ahaa inuu usoo wareego Stamford Bridge oo uu xilli ciyaareedka dambe si rasmi ah uga hawl bilaabi doono.
Kaddib toddobaadyo uu muran xoogani ka taagnaa mustaqbalkiisa, heshiiska uu Timo Werner ugu soo wareegay Chelsea ayaa la xaqiijiyay 18-kii bishii June.
Marka laga yimaado inuu xiiso mudo dheer soo taagnaa ka helayay kooxda dhawaan kusoo guuleysatay Premier League ee Liverpool, Timo ayaa sheegay in macalin Frank Lampard uu yahay sababta ugu weyn ee uu Chelsea ugu wareegay.
Jamaahiirta Chelsea ayaa hore baraha bulshada ugu muujiyay dareenkooda farxadeed ee inay la saxeexdeen Werner oo xilli ciyaareedka dambe la shaqayn doona xiddigo uu kamid yahay Hakim Ziyech oo qudhiisu saxeex cusub ahi.
Timo Werner oo u warramay Website-ka rasmiga ah ee Chelsea shalay ayaa la weydiiyay go’aankii uu ugu wareegay kooxdaas waxaana uu xusay inuu doorka ugu muhiimsan ka qaatay Frank Lampard.
Werner ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Marka aad haysato go’aan ah inaad kasoo tagto kooxdaadii hore ee aad tagayso koox weyn sidan oo kale, aniga waxay ii ahayd riyo rumawday sababtoo ah Chelsea waa koox aad u weyn”
“Hanaanka loo ciyaaro Premier League waa mid aad u xawaare badan aniga takhasuskayguna waa inaan dhab ahaan ahay mid dheereeya sidaas darteed waxaan filayaa inay halkani tahay meeshii igu haboonayd ee aan ka ciyaari lahaa, isaga (Lampard) ayaa ahaa qoddobka muhiimka ah”